Super Crunchers naIan Ayres | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 19, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vaverengi vakajairika veblog rangu vanoziva kuti ini ndagara ndiri an mutsigiri wekuyera. Basa mukushambadzira kwedhatabhesi rakavhura maziso angu kusimba re data uye kugona kwayo kunyatsobatsira kushambadzira. Kupinda iyo Webtrends Bata 2009 Musangano yakanga iri kurudziro uye yakandiisa pachirongwa chekuona makambani kuyera uye kuongorora marongero avo epamhepo ekushambadzira.
Webtrends vakakokwa Ian Ayres kutaura nezvebhuku rake, Super Crunchers. Ndakagamuchira bhuku rakanyorwa nemifananidzo pachiitiko ichi ndokutanga kuriverenga mundege. Ndakave nenguva yakaoma kuzviisa pasi kubva!
Ini ndinofunga iro dingindira rese rebhuku rinogona kupfupiswa mumutsara mumwe chete:
Isu tinoona kurwa kweiyo intuition, ruzivo rwega, uye huzivi hwekuda kurwa neuto rakashata rehuwandu.
Ayres inopa yakajeka mienzaniso kubva mhiri kwakasarudzika mukurapa, hurumende, dzidzo, iyo indasitiri yemamuvhi… uye kunyangwe kusarudzwa kwewaini… kutsigira kukwenya manhamba. Yese mienzaniso inotsigira fungidziro yekuti kuunganidzwa kwedata uye kuongororwa kwakazara (nechimwe chakakosha kutarisa kudzokorodza kuongororwa) kunogona kutipa ruzivo rwekuvandudza uye kunyange kufanotaura zvawanikwa mubhizinesi.
Kunyangwe usiri fan yekuongorora, iri ibhuku rakanakira chero bhizinesi kana mushambadzi kuti atore.
Kuyerwa kweMidhiya Midhiya kunofanirwa!
Apr 21, 2009 pa 9: 23 PM
Ndiri pakati pebhuku iri ini. Wakafa chaiko uye une rombo rakanaka kumunzwa achitaura. Ndiri kushandisa mazano kukurudzira nzira dziri nani dzekuita basa revanhu (funga kushambadzira mukati me "zvigadzirwa" zvemubhadharo uye mabhenefiti.
Kutenda nekutumira kukuru.
Apr 21, 2009 pa 11: 58 PM
Thanks Bill! Kuti ndikuudze chokwadi, ndakanakidzwa nebhuku iri kupfuura ratidziro! Ini ndinofunga nzara yake yekuongorora data iri pachena zvakanyanya mukunyora kwaVa Ayres.